Xubin mayal-adag ah oo matali doonta xisbiga SD - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sumadda SD. Sawirle: Björn Larsson Rosvall/Scanpix
Xubin mayal-adag ah oo matali doonta xisbiga SD
La daabacay fredag 23 november 2012 kl 14.28
Magaalada Lidköping ayaa lagu wadaa inuu xubin mayal-adag ah ka mid noqdo maamulka siyaasiyiinta hoggaanka degmadaasi, isagoona u meteli doona xisbiga Sverigedimoqoraadiga.
- Waa mid laga tiiraanyoodo, sida uu sheegay Björn Söder, isagoona intaa ku daray in xisbigiisu damacsan yahay siduu wax uga bedeli lahaa xeerka doorashada.
Curt Linusson, ahna 69 jir ayaa hore uga tirsanaan jiray ururrada xag-jirka ee mabaadiida Naaziga, halka sida uu qoray war-geeyska Expo uu ka mid ahaa aasaaseyaashii ururka ciidanka u janjeera ee Legion Vasa, helayna coddadkii ugu tirada badnaa xisbiga SD ee doorashadii ugu dambeeysay.
Linusson ayaa kursigaa loo dooran doonaa maadaama uu mid ka mid ah xubnihii siyaasiyiinta xisbiga SD ee degmada Lidköping u matalayay uu magaaladaa ka guuray.
- Waxa ay u muuqataa inuu kursiga isagu ku fariisan doono , sida ay sheegtay Agneta Eriksson oo ah sarkaalad ka howl-gasha laanta shuruucda ee maamulka gobolka, lana filayo inay go'aan middaa ka gaadho toddobaadka foodda innagu soo haya.
Hogaamiyaha xisbiga Jimmie Åkesson iyo dhammaan hoggaanka xisbiga ayuu Curt Linusson ku noqon doonaa caqabad hor leh ee la soo gudboonaata, maadaama uu sheegay in kursiga uu ku matalayo xisbiga SD u isticmaali doono siduu ku meel-marin lahaa siyaasadda xisbiga Iswiidhishka.
- Waxaan abuuri doonaa jah-wareer, sida uu sheegay mar uu u waramayay war-geeyska Nya Lidköping.
Ma laga yaabaa in nikani magac-xumo u soo jiido xisbiga SD?
- Ma ahan mid aan wax ka qaban karno, sharciga ayaa sidaa u qoran, sida uu sheegay Björn Söder, xog-hayaha xisbiga SD oo su'aasha ka jawaabayay.
Xisbiga SD ayaa doonaya inuu is-bedel xeerka ku sameeyo, si ey xisbiyadu ugu madax-bannaanaadaan cidda matalaysa.
Curt Linusson, oo isku magacaaba inuu nashinaaliiste yahay ayuu xukun xabsi bil ah ku dhacay sannadkii 2005, midkaasina oo la xiriiay waxa lagu magacaabo isku dirka qowmiyadaha kala duwan "hets mot folkgrupp".